Articles par site :: News Mada
Niakatra be ny tahan’ireo nifindran’ny valanaretina sy ireo matin’ny Covid 19, ny faran’ny herinandro teo. Nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny fanjakana hamerina ny fihibohana tanteraka ho an’ny faritra Analamanga. Ho hentitra ny fampanarahana ny fepetra! Tsy latsaky ny 200...
100 afakomaly, 109 omaly. Tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Olona roa indray, omaly, no nindaosin’ny fahafatesana ka nanampy ny isan’ireo maty ho tafakatra 26. Ahina tsy ho voafehy intsony… Efa aman-jatony amin’izay ny antonta...
Nanakoako ny poa-basy nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisy tao amin’ny fokontany Mangarano ka hatrany Barikadimy, Toamasina, ny alarobia alina teo. Fantatra fa miaramila serzà ny roa tamin’ireo jiolahy telo indray maty voatifitry ny polisin’ny Fip… Jiola...
Tafakatra 22 izany ireo namoy ny ainy noho ny valanaretina covid-19. Niampy roa izany, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Efa zary lasa foiben’ny valanaretina covid-19 mihitsy izany izao Analamanga raha ny tranga vaovao tato ho ato. Zara raha mielanelana roa andro ny fahafatesana....
Vehivavy mpivaro-tena iray, maty nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tao an-tampon-tananan’Andapa, omaly. Natsipin’ireo olon-dratsy tao anaty tokotanin’olona ny fatiny, avy eo. Hitan’ireo mpandalo tao anaty bozaka, anatina tambohon’olon-tsotra teo akaikin’i Sonatra, tampon-...
Niverina nampihatra ny lalàna amin’ireo tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana, noho izao fihanaky ny valanaretina coronavirus izao ny mpitandro filaminana. Omaly maraina fotsiny, taxibe 28 no nampidirina ”fourrière”. Saofera sy resevera miisa 70 mahery kosa no naiditra ”violon...